Code Google Analytics ee Xisaabaadyo badan
Google Analytics: La Soco Xisaabaadyo Badan (Koodh Cusub)
Tuesday, April 5, 2011 Khamiista, Diseembar 1, 2011 Douglas Karr
Badanaa waxaa jira baahi loo qabo in lala socdo hal bog oo ku jira xisaabaadka badan ee Google Analytics. Tusaale ahaan, laga yaabee inaad leedahay akoonno badan - mid macaamiisha ah iyo mid wakaaladdaada ah - oo aad jeclaan lahayd inaad xogta isugu rogto midba midka kale. Si taas loo sameeyo, waa inaad labada xisaaboodba ku sheegtaa bog kasta.
Tani waxay ahayd hawl fudud oo fudud oo la socota koodhkii hore ee Urchin (boggaTracker) laakiin si la yaab leh ayay ugu fududahay qoraalka cusub ee Google Analytics ee lagu soo daray.
Asal ahaan, waxaad si fudud ugu dartaa koontada dheeriga ah'gaq array '! Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax ku darto, waxaad si fudud ugu beddelaysaa "b" una dhigtaa "c" iyo wixii la mid ah, iyo wixii la mid ah. Maskaxda ku hay inaad ku daadinayso cookies-ka akoon kasta oo aad ku darto, hase yeeshe, markaa yaan lagaa qaadin.
Crowdsource Xogtaada B2B Nadiifinta
6, 2011 at 3: 33 PM
Tilmaam aad u fiican! Waad ku mahadsantahay wadaagida Doug! Ma jiraan wax saameyn ah oo waxyeello u geysan kara lambarro badan oo goobta ku jira haddii si sax ah loo qaabeeyo? Marka laga soo tago firdhinta dheeraadka ah ee buskudka meesha oo dhan?
6, 2011 at 3: 38 PM
Midna wax alla wixii HADDII si habboon loo qaabeeyo. Haddii aad si fudud u dhajiso dhowr qoraal oo kala duwan oo qoraal ah bog, waxay ku burburin kartaa burburin leh cookies, heerarka boodboodka, iyo tirooyinka guud, in kastoo.
Apr 19, 2013 at 8: 24 PM
Hirgelintaani waxay umuuqataa inaysan ushaqeyneyn mid kamid ah barahayada. Miyaad ogaatay inaysan sii shaqeynaynin sidoo kale? Fikrado kasta sababta ay u lahaan lahayd?